Soo ogow waa maxay Astaamaha-Astaamaha | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Astaamaha, Khayraadka
Maalin kasta waxaan qornaa farriimaha qoraalka iyada oo loo marayo malaayiin goobood oo hadda ka jira webka. Ama taleefannadeenna gacanta, kiniin ahaan ama si kasta ha noqotee, kumbuyuutarradeena, waan faahfaahinnay sadar farriimo kuwaas oo wata ujeeddo, fikrad ama mowduuc.
Waa wax lagu qoslo in laga fikiro inta farriintu is beddeli karto kaliya ku lifaaqan astaanta. Weji fudud ama shay tilmaamaya xoogaa dareen ama astaan ​​maaddo gaar ah, ugu dambayntiina waa fududaanta ka dhigaysa astaamahan mid waxtar leh, taas oo u oggolaanaysa farriinta in si sax ah loo gudbiyo. In kasta oo dabcan, waa inaan maskaxda ku haynaa inay macquul tahay taas dadku way tarjumi karaan astaamaha qaabkeeda, taas oo ay tahay inaan ka digno in macnaha guud uu noqon doono isbeddel aad muhiim u ah marka la turjumayo fariimaha icon.
1 Maxay yihiin astaamaha
2 Waa maxay Icons-icons?
Maxay yihiin astaamaha
Astaamuhu markaa waa dhammaystir u ah qoritaanka adduunka dhijitaalka ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan qeexno ama ku lifaaqno cod (si aan ula hadalno) farriin gaar ah, taasoo noo oggolaaneysa inaan wax badan milicsanno tamarteena qofka qaata fariinta. Sannadihii ugu dambeeyay, waxay noqdeen kaamil dhammaystirka farriimaha qoraalka, oo ay adeegsadaan dhammaan dadweynaha, kan ugu yar ilaa kan ugu da'da weyn, in kasta oo dabcan, waxaan ognahay in fasiraadda kuwan waxay noqon kartaa mid shaqsiyeed.
Aynu eegno tusaale kooban oo ah sida aan awoodnay baaro saamaynta astaamaha fariimaha qoraalka ah.
Astaanta waa matalaada waxoogaa tilmaam ah ama shucuur ah, taas oo kudareysa muujinta ama tilmaanta farriinta. Aynu daqiiqad qiyaasno hawl aad u fudud. Aynu u maleyno inaan helnay fariin qoraal ah fariintaasna waa mid fudud "Halow" laakiin qiyaasi labo xaaladood, midkoodna in "Hello" ay weheliso weji faraxsan iyo mid kale oo taas "Hello" ay si fudud keli u tahay.
Kiis kasta, mid ayaa u malayn kara in marka loo eego "Hello" oo weheliso weji faraxsan ay ka timaaddo qof la yimid war wanaagsan ama sidoo kale ku imaan kara xaalad farxad leh; halka qofka soo diraa "Hello" kaligiis, wuu farxi karaa ama murugoon karaa laakiin ma jirin hab lagu kala sooci karo, maadaama xarfaha kiiskan aysan matalin dhammaan tamarta fariinta lafteeda.
Waa maxay Icons-icons?
Maqaalka maanta ayaa soo bandhigaya madal muddo sannad ah gacanta ku haysay ururinta astaamo badan intii suurtagal ahs, si loo siiyo dadka isticmaala qalab ballaaran astaamo kala duwan inaad kala soo baxdo kuna isticmaasho qalabkaaga casriga ah ama kumbuyuutarkaaga.
Boggu wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka badbaadiyo adeegsadaha raadinta caajiska ah iyada oo loo marayo goobo badan oo shabakadda ah, taas oo u oggolaanaysa isticmaalaha inuu marin u helo a astaamo badan hal bog ah. Waa horumar weyn, maxaa yeelay sida aan ognahay, horumarka raadinta smart shabakadda ayaa ka saxsan.
Sidoo kale, astaamaha waa loo qaybiyaa hadba sida ay u kala yihiin, iyo sidoo kale codadkiisa sawir. Fikradda ayaa ah u soo bandhig adeegsadaha si caqli gal ah ku saabsan astaamaha laftooda. Waxaas oo dhan waxaa u dheer, boggu wuxuu leeyahay makiinad raadisa 14 luqadood, si loogu daboolo in badan oo ka mid ah dadka adduunka.
Isticmaalaha Waxaad dooran kartaa mid kasta oo ka mid ah astaamaha aad rabto inaad soo dejiso, si aad u fuliso soo degsashada feylasha daqiiqad cayiman isla qaabkii ay ku xushay.
Marka la soo koobo, goobta "Astaamaha-Astaamaha " waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si caqligal ah u raadsadaan tiro cayiman oo astaamo ah oo shabakadda ah, iyagoo waqti iyo tamar ka badbaadinaya booqashooyinka aan loo baahnayn ee goobaha u nugul caabuqa fayraska ama dalabyada been abuurka ah. Xilligan, bogga sii wado wajigeeda horumarineed, sameynta qaab cusub oo adeegsadayaashu ay ku qaabeyn karaan astaamo u gaar ah, sameynta gammahooda u gaarka ah isla markaana shakhsi ka dhigeysa ururinta astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Astaamaha - Astaamaha, mashiinka raadinta astaanta
Autodesk 3ds Max mid ka mid ah software-ka ugu fiican abuurista shaxanka
Omexpo waxaa qoray Futurizz iyo isbadalka naqshada